Archives Maalgelinta • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Tags Qoraalada lagu calaamadeeyay "maalgashiga"
Maalgashiga kaydadka xashiishadda canbaashu waa hype. Gaar ahaan ka dib abuuritaanka, iibinta iyo isticmaalka madadaalada waxaa sharciyeysan Kanada iyo qaar ka mid ah Gobollada Mareykanka. Immisa dowladood ayaa raaci doona maxaase laga sameeyaa suuqa xashiishadda? Xaqiiqdu waxay tahay ka dib sharciyeeynta kadib, baahida loo qabo xashiishadda cannabis ayaa qarxday, taas oo sababtay in Canada, iyo waxyaabo kaleba, ay la soo deristo yaraanta xashiishadda. Soo-saareyaashu waxay arkayaan in iibkoodu kordhayo, laakiin sidoo kale waa inay maal badan geliyaan sidii ay u buuxin lahaayeen baahida loo qabo xashiishadda. Sidaas darteed, qiimaha saamiyada xashiishadda waa mid aan macquul ahayn. Waxa jira maal-gashadeyaal sameeya malaayiin, laakiin sidoo kale maal-gashadeyaal lacag lumiya.
Waxaa jira horumarro badan oo dhawaanahan oo si togan u saameeya suuqa xashiishadda. baaxad weyn…
Saamiyada & Dhaqaalahacannabis
5 Tilmaamood oo la tixgelinayo Markaad Maalgashanayso Saamiyada Marijuana
albaabka daroogada 14 Oktoobar 2020
Maalgashadayaal badan, maalgashiga suuqa xashiishadda waxay u ekaan kartaa faa'iido badan. Xaaladda hadda jirta…
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBD
albaabka daroogada 28 September 2020
Suuqa maalgashiga xashiishadda yar ee Yurub ayaa muujinaya calaamado nololeed, oo leh…
cannabisSaamiyada & Dhaqaalaha
Kaydiyaasha xashiishka: kiciyeyaasha iyo dooxada
albaabka Ties Inc. March 27 2020
Kaydka xashiishadda: maxay sameynayaan waqtiyada cudurka faafa ee corona? Hoos waxaa ku yaal liiska…
Corona iyo xashiishadda: coronavirus waxsoosaarka saamiyada xashiishadda
albaabka Ties Inc. March 4 2020
Ma samayn kartid kanaal ilaa ay ka tahay coronavirus-ka oo ku dhawaad ​​​​…
Saamiyada Aurora Cannabis ayaa hoos u dhacay in ka badan boqolkiiba shan maanta ka dib warbixin ay shirkaddu qorsheyneyso…
Saamiyada & DhaqaalahacannabisCBDWararkaSharci dejinta & Sharci dejinta
albaabka Ties Inc. January 15 2020
In kasta oo ay sii yaraanayso rajada maalgashadayaasha ee ganacsiga xashiishadda, sida uu sheegay Noah Hamman,…
Xashiishadda xashiishadda ayaa burburtay
albaabka Ties Inc. 25 Oktoobar 2019
Waa joogsan kari waayay Kanada waxay sharciyeysay isticmaalka, iibinta iyo beerashada…
Kaydadka Marijuana ee diyaar u ah inay ka baxaan eber una gudbiyaan halista dhabta ah
albaabka daroogada August 10 2019
Xiisaha maalgashigu waa uu ka wareegayaa shirkado waaweyn una guuraya shirkado yaryar, oo awood sare leh.…
Natiijooyinka Kobaca Canopy ee saddexdii biloodba mar soo socda. Maxaan filan karnaa?
albaabka daroogada August 6 2019
Kobaca Canopy (WEED) (CGC) ayaa ka warbixin doona rubuc-maaliyadeedka kowaad…
Kaniisadda England, oo ah urur diimeedka ugu weyn uguna saamaynta badan gudaha Britain, ayaa ku dhawaaqay…
Kahor intaanan u galin doodaha ku saabsan maalgashiga CBD (ama cannabidiol) kaydka saliida,…
cannabisCBDWargeysyada caalamiga ah ee cannabis
Canopy Growth Corp. (CGC) ayaa iibsatay shirkadda daryeelka maqaarka iyo ladnaanta This Works® (UK) $ 73,8 Milyan dollar
albaabka daroogada 23 May 2019
Shirkadda fadhigeedu yahay London This Works® waxay noqon doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah…
Haweenka iyo waayeelka ayaa ku biiraya dhaqdhaqaaqa xashiishadda, iyagoo furaya fursado maalgashi oo cusub, sida laga soo xigtay…